HORAY MA U OGEEYD? COVID Tallaalka | Informing Families
Adeega xaq u yeelashada qadka ee Gobolka looma baahan doono laga bilaabo 31-ka Maarso
Horin Raadiyaha Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (OLYMPIA) , oo ah aaladda u-qalmitaanka tallaalka ee gobolka ee gobolka, mar dambe looma baahnaan doono inuu caddeeyo u-qalmitaanka tallaalka COVID-19 laga bilaabo Maarso 31.
Taasi waxay ka dhigan tahay in dadka doonaya tallaal ay hubiyaan websaydka hagidda mudnaanta ee DOH si loo arko goorta ay u qalmaan in la tallaalo. Kuwa xaqa u leh waxay markaa isticmaali karaan Tusiyaha Tallaalka si ay ballan uga helaan. Wixii ka dambeeya 30-ka Maarso, kuwa soo booqda barta Horin Sheegaha waxaa lagu hagaajin doonaa Tusiyaha Tallaalka. Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) ayaa ku wargalisay bixiyeyaasha tallaalka isbeddelkan. DOH ayaa weydiisatey in bixiyeyaashu aysan mar dambe u baahnayn Horin Raadiyaha inay ballan qabsadaan ama weydiistaan ​​markay bukaanku u yimaadaan ballanta.
Tallaal Tusiyuhu waxaa lagu heli karaa 30 luqadood waxaana lagu dari doonaa toddobo luqadood dhammaadka Abriil. Kuwa qaba su’aalo dheeri ah ama ubaahan caawimaad sameynta ballan waxay wici karaan khadka taleefoonka gobolka ee COVID-19 1-800-525-0127, ka dibna riix #. Caawimaad Luqadda ayaa la heli karaa.
In kasta oo Horin Raadiyaha uu tagayo, horimada tallaalka ee gobolku sidooda ayey ahaanayaan. Gobolku wuxuu kujiraa Wajiga 1B2, iyo 31-ka Maarso, u-qalmitaanka tallaalku wuxuu u furmayaa dadka kujira Horinta 1B heerka 3 iyo 4.
“Hadafku waa in la talaalo sida ugu dhakh-saha badan xubnaha bulshada ee nugul ka hor inta aan la furin u qalmitaanka tallaalka qof kasta oo jira 16 sano iyo ka weyn toddo-baadyo gudahood. Saaridda Horin Raadiyaha ayaa gacan ka geysaneysa in la dedejiyo howsha iyadoo la yareynayo caqabadaha shakhsiyaadka u qalma, ”ayey tiri Michele Roberts, oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha gobolka ee soo saarista tallaalka COVID-19. “Waxaan ku kalsoonahay dadka intiisa badan inay sii wadi doonaan inay sameeyaan waxa saxda ah oo ay sugaan markooda in la tallaa-lo.”
HORAY MA U OGEEYD?
Dhammaan daryeel-bixiyeyaasha caawiya qof khatar weyn ugu jira xanuun daran COVID 19 dartii sababtuna tahay da’, xaalad jismi oo muddo dheer ah, xanuunno wada-jir ah, ama naafonimo xagga caqliga / koritaanka ah (oo ay ku jiraan carruurta naafada ah) ayaa hadda xaq u leh tallaalka COVID-19.
Daryeelayaasha u qalma waxay noqon karaan mushaar la’aan, mushaar, rasmi ah, ama aan rasmi ahayn. Xubnaha qoyska, tan adiga ayaa ka mid ah!
Si aad u bilowdo, booqo findyourphasewa.org. Ka jawaab “Haa” markii lagu weydiiyo haddii aad ka shaqeyso goob daryeel caafimaad.
U Qalmitaanka Tallaalka IYO NAAFONIMADA
Laga bilaabo 17-ka Maarso, shakhsiyaadka da’adooda ka weyntahay 16 ee qabo naafonimo galin karta halis ba’an ee cudurka COVID-19 ayaa xaq u yeelan doona tallaalka.
Tan waxaa ka mid ah dadka qaba xanuunka Down syndrome, ama naafonimo kale oo maskaxeed / koritaan, ama dhagoole / dhego culus, indhoole / aragti hoose, ama indho la’aan iyo dhago la’aanba isku darsaday; IYO naafonimadiisa, ama xaalad caafimaad oo daahsoon, waxay kordhisaa halistooda cudurka daran ee COVID.
Updated on Apr/12/2021